मुलासँगै यी चीज भुलेर पनि नखानुहोस्, जसले तपाईको जिन्दगी नै बर्बाद पार्छ !
काठमाडौँ । मुला प्राय धेरैको भान्सामा नटुट्ने चिज हो । मुलालाई खानासँगै सलादको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । स्वास्थ्यको देष्टिले निकै फाइदाजनक मानिने मुला पायल्स रोगको निको पार्ने अचुक औषधी हो । नियमित रुपमा मुलाको सेवन गर्नाले पायल्स रोग एक महिनामा नै निको हुन्छ ।
हरेक समय शरिरको हिस्साहरुमा पिडाबोध पायल्सले पिडाबोध गराइरहेको हुन्छ । मुलामा पाइने डाइट्री फाइबर्सले निष्काशन हुने दिशालाई मुलायम बनाउनमा सहयोग गर्छ । यसले पाचन प्रक्रियालाई विशेष सहयोग गर्छ । मुलामा पाइने हरेक तत्वले पायल्सको पिडालाई कम गर्छ । साथै मुलाको सेवनले शरिरलाई चिसो प्राप्त हुन्छ ।
पायल्स रोगीको लागि काँचो मुला उपयुक्त मानिन्छ । अझ मुलाको रस निकालेर खानु झनै राम्रो हुन्छ । यसको प्रयोगले संक्रमित स्थानमा हुने जलनलाई शानत बनाउँछ । सहजै मुला पाउन नसकेको अवस्थमा बजारमा पाइने मुलाको पाउडर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं ।
टन्सिल भयो भनेर डक्डरकोमा हतारिएर जानु भन्दा पहिले आफै घरायसी उपचार गर्न सिक्नुहोस् ।
सबै रोगको अचुक औषधि घिउकुमारी । सबैलाइ काम लाग्ने जानकारी भएकाले सक्दो सेयर गराैँ !!
के कारणले मृगौला फेल हुन्छ ? यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ! शेयर पनि…
गाउँघरमा नै गर्भ निरोधका प्राकृतिक उपायहरु अपनाउन सकिन्छ, जानकारीको लागि सेयर गरौं !
क्यान्सर, मोटोपना र दम लाग्नै नदिन लागेपनि केही दिनमै चैट बनाउने यो फल खानुहोस् -सेयर…